कस्ले झुक्यायो हाइब्रिड धान भनेर ? धान फल्नु पर्ने समयसम्म बालै पसाएन
काठमाडौं । गरिमा जातको हाइब्रिड धान भनेर लगाएको विउ नक्करी भएको हुन सक्ने आशंका अध्ययन समितिलाई लागेको छ । चितवनमा किसानले गरिमा जातको हाइब्रिड धान भनेर लगाएको विउ नक्करी भएको..
सरकारले एकैपटक दूधको मूल्य ६ रुपैयाँ बढयो
काठमाडौँ । सरकारले एकैपटक दूधको मूल्य ६ रुपैयाँ बढाएको छ । बिहीबार सरकारले दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको दूग्ध विकास संस्थानका महाप्रवन्धक शैलेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए । महाप्रवन्धक..
काठमाडौं । राजधानीको बल्खुस्थित तरकारी बजारभित्रै बिचौलियाको बिगबिगी रहेका पाइएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुमगनका क्रममा बल्खु तरकारी बजारमै बिचौलियाहरूको बिगबिगी रहेको पाइएको हो..
गण्डकीले २ सय किसानलाई इजरायल पठाउने
काठमाडौं । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउन तालिमका लागि इजरायल पठाउने भएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २ सय किसानलाई कृषिको १ वर्षे तालिमका..
भारतको दवावपछि सरकारी निर्णय फिर्ता, विषादी परीक्षण विना नै तरकारी र फलफूल आयात हुने
काठमाडौं। सरकारले विषादी परीक्षण विनानै भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपालमा तरकारी र फलफूल आयात गर्न बाटो खोलिदिएको छ। भारतीय दूतावासले लिखित पत्र नै पठाएर दबाव दिएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६..
१५ असारमा हली बन्दा यस्ता देखिए डा. बाबुराम भट्टराई
Posted on Jun 30 2019
काठमाडौं । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई किसान हुलियामा देखिएका छन्। असार १५ अर्थात् धान दिवसको दिन आइतबार भट्टराई आफ्नै गाउँ गोरखामा गोरुसँगै खेत हिल्याइरहेको अवस्थामा देखिएका..
ज्याला दिन नसक्ने भन्दै इलामका चिया उद्योग बन्द
इलाम । चियाको राजधानी भनेर चिनिएको इलाममा चियाको विषयलाई लिएर बारम्बार आन्दोलन हुन थालेको छ । सरकारले तोकेको ज्याला कार्यन्वयन गर्ने क्रममा बारम्बार आन्दोलन हुन थालेको छ । मजदुर आन्दोलन चर्किएपछि..
विचरा माहुरीको के दोष ? बनरक्षकले नै जलाए ३१ घार माहुरी
काठमाडौं । स्थानीयबासीले मध्यवर्ती क्षेत्रको वनभित्र राखेका माहुरीका घारलाई निकुञ्जका कर्मचारीले नै आगो लगाए जलाएका छन्। ऋणमोक्ष मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति अन्तर्गतको छायानाथ रारा नगरपालिका ७ को डावा रानीखाडा वन उपभोक्ता..
बहुउपयोगी सतुवा खेतीतर्फ लमजुङका कृषकको आकर्षण बढ्दै
लम्जुङ । अलैँचीको हव जिल्लाको रुपमा परिचित लमजुङका कृषकको पछिल्लो समयमा बहुउपयोगी सतुवा खेतीतर्फ आकर्षण बढेको छ । बहुऔषधि गुणले युक्त भएको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सतुवाको माग उच्च..
काठमाडौं । मकवानपुरको पर्यटकीय गन्तव्य चित्लाङ हरेक सम्भावनाले भरिपूर्ण छ । यो भेग कृषि, पशुपालन र पर्यटकिय दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ । राजधानी काठमाडौंबाट करिव ६० किमीको पश्चिम दक्षिण दिशामा अवस्थित..
सुनसरी । सुनसरीमा पशुपालनतर्फ कृषकको आकर्षण बढेसँगै जिल्लामा दूध, मासु तथा माछाको उत्पादनमा वृद्धि भएको पाइएको छ । जिल्लामा गाईभैंसीको दूध तथा माछामासुको उत्पादनमा वार्षिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको पशुसेवा ज्ञान..
नेपालमै यस्तो ठाउँ जहाँ संसारकै लोपोन्मुख रातो माछा पाइन्छ !
खोटाङ । चारैतिर वनजङ्गल बीचमा एकनासले अचल भएर बसेको छ, विशाल पोखरी । जसको मुहान र निकास केही देखिन्न । चारैतिर पहाडै पहाडको बीच भागमा रहेको समथर जमीनमा अवस्थित पोखरीको..
१० रुपैयाँ किलोमा पनि बिकेन गोलभेडा, भारतीय गोलभेडाको मारमा किसान
Posted on Feb 24 2019
वीरगञ्ज। सरुहठ्ठा–९ रौतहटका किसान मो। उस्मानले उत्पादन गरेको भोलभेडाले बजार पाएन। बजार नपाएपछि उनले ठूलो नोक्सानी ब्योहोरे। भारतबाट सहज रुपमा गोलभेडा आएका कारण उनको उत्पादनले बजार नपाएको हो। पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत लालबन्दी..
देशकै पहिलो खोप उद्योग : पशुमा लगाइने २० प्रकारका खोपको उत्पादन शुरू
काठमाडौं । हेस्टर बायोसाइन्सेस् नेपालले पशुपक्षीका लागि २० प्रकारका भ्याक्सिनको उत्पादन शुरू गरेको छ । गोल्छा अर्गनाइजेशनले भारतको हेस्टर बायोसाइन्सेस् प्राइभेट लिमिटेडसँगको संयुक्त लगानीमा नेपालमै पहिलोपल्ट यस्तो उद्योग स्थापना गरी उत्पादन..
सरकारी अनुदान पाउन कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत घुस दिनुपर्ने किसानको बाध्यता
लमजुङ्ग । देश दौडाहकै क्रममा लमजुङ पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई लमजुङका एक किसानले सरकारी अनुदान पाउन कठिन भएको गुनासो पोखे । जिल्लाका नेता तथा..
पौरखी हातः बाँझो जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती, बर्ष कै २५ लाख कमाई
परशुराम। डडेल्धुराको गन्यापधुरा र अमरगढी नगरपालिकाका पाँच युवाले सामूहिक खेती गर्दै आएका छन्। २५ बर्षदेखि बाँझो रहेको १०२ रोपनी जग्गा भाडामा लिई उनीहरुले एकै वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका..
अण्डा विक्री गर्दा प्रति क्रेट ३०० रुपैयाँ पाउनु पर्ने किसानको माग
चितवन। लेयर्स कुखुरापालक कृषकले लागतअनुसारको मूल्य नपाएपछि नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। उनीहरुले नारायणगढमा सँगै रहेको दाना वितरक सङ्घको कार्यालयमा पनि ताला लगाएका छन्। सङ्घले किसानको..
उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५३६ रुपैयाँ, उद्योगीले ४७१ र सरकारले ६५ रुपैयाँ दिने
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि उखुको न्युनतम खरिद मूल्य ५३६ रुपैयाँ तोकेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उखुको न्यूनतम् खरिद मूल्य निर्धारण गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना..
दमौली । तनहुँमा यस वर्ष २५ करोड बराबरको सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । सुन्तला खेतीका लागि यस वर्ष मौसम अनुकूल भएको र उत्पादन क्षेत्र बढेकाले सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि..
अब दूधमा पानी मिसाए १० हजार जरिवाना, दुषित पारेमा ५ बर्ष जेल
काठमाडौं । सरकारले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा स्वच्छता कायम गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका, २०७५’ जारी..
१२ करोडको लागतमा प्रादेशिक दुग्ध उद्योग खुल्ने
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा निजी लगानीमा रु १२ करोडको प्रदेशस्तरीय दुग्ध उद्योग निर्माण गर्न थालिएको छ । काभ्रेस्थित धुलिखेल नगरपालिकाका उद्योगी माधव धिताल र पाँचखाल नगरपालिकाका उद्योगी जयकृष्ण..
गभारो लागेपछि ‘सुन्तालाको जोन’ प्रभावित, घट्यो उत्पादन
Posted on Dec 09 2018
काठमाडौं । गभारो र ढुसी रोग लागेका कारण जाजरकोटमा यो वर्ष सुन्तला उत्पादनमा गिरावट भएको छ । सरकारले ‘जोन घोषणा’ गरेको जाजरकोटमा सुन्तला उत्पादन घटेपछि किसान चिन्तित छन् । रोगका कारण..
परिश्रमी पूर्वमन्त्री: माछा पाल्दै लाखौं रुपैया कमाउदै
Posted on Dec 01 2018
काठमाडौं । मन्त्री र सांसद भइसकेको व्यक्ति पनि कृषि पेशामा लाग्लान् र भन्ने धेरैको आशङ्का हुने गर्दछ । हुन पनि धेरै राजनीति गर्ने नेताहरु मन्त्री भइसकेपछि राजनीतिलाई नै अगाडि बढाउने..
माग घटेपछि अण्डा नष्ट गर्दै ह्याचरी व्यवसायी
चितवन । कुखुराको चल्लाको माग घटेपछि ह्याचरी उद्योगले चल्ला उत्पादन गर्ने फुल नष्ट गर्ने भएका छन् । देशभरका लेयर्स ह्याचरीले चल्ला उत्पादन गर्ने कूल फुलमध्ये आधा फुल नष्ट गर्ने र आधाको..
‘कालो सुन’को करामत, उकासियो आर्थिक हैसियत
लमजुङ। मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–७ छिनखोलाका अजय तामाङको दिनचर्या अलैंची बारीमै बित्छ । कालो सुनका रूपमा हेरिने अलैंची खेती थालेपछि भने उनी आर्थिक रूपले सम्पन्न मात्र छैनन्, रोजगारी दिलाउन सक्ने हैसियतमा पनि..
सरकारले यो वर्ष पाँच प्रतिशतमाथिको कृषि उत्पादनको अपेक्षा गरेको छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रविधि प्रयोगशालामा सीमित हुँदा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण हुन नसकेको बताएका छन्। नेपाल समाजशास्त्र सङ्घको आयोजनामा आज राजधानीमा भएको ‘नेपालको कृषि संरचना: समृद्धिका लागि रचनात्मक..
प्रशासन कार्यालयमा उजुरी: मुसाले धान खायो कार्वाही गरी पाउँ !
पर्वत । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–११ सिल्मीको फाँटमा पाकेको धान मुसाले सखाप पारेपछि कृषकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुहार मागेका छन् । पाक्न थालेको धान ६० प्रतिशत मुसाले सखाप पारेको भन्दै किसानले मुसा..
एक हजार रुपैयाँबाट यसरी करोडपति बने चन्द्रबहादुर
गलेश्वर । आजभन्दा ४० वर्ष पहिले गरिबीका कारण के खाउँ र के लाउँको अवस्थामा रहेका एक व्यक्ति न विदेश पलायन, न कुनै जागिर न त उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर करोडपति..
सिङ्गो बस्ती नै ब्यवसायिक तरकारी खेतीमा, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि कृषि खेति गर्दै
भीमदत्तनगर। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–६ बालुवाफाँटामा अधिकांश किसान अन्नबाली छाडेर नगदेबालीका रुपमा तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। तरकारीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि यहाँका किसान व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। लामो समय..
काठमाडौं । विगत सात वर्षदेखि निरन्तर पुष्प व्यवसाय गर्दै आएका रमिला खड्काले यस वर्ष पनि फूल व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गरेकी छिन्। काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–१० जनागालमा विगत सात वर्ष अगाडिदेखि व्यावसायिक..